တိုက်ဆိုင်မူလား – တိုက်ခိုက်မူလား ( စင်္ကာပူ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ တရုတ်ကို ပြတ်သားစွာဝေဖန်လိုက်တဲ့ အမေရိကန် ဒုသမ္မတ Harris ကျန်းမာရေးရုတ်တရက် ချို့ယွင်း )
Harris ဗီယက်နမ်မထွက်ခွာမီ ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းတယ်..3နာရီလောက်နောက်ကျမယ်ပြောတယ်.. ဒီည ဗီယက်နမ်ရောက် Harris သတင်းအခြေအနေ မသိရသေးပါ.. ရောဂါကတော့ ရုတ်တရက် ခေါင်းမူး အော့အန် မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်း ဖြစ်တဲ့ Havana Syndrome လို့ပြောနေပါတယ်.. စိတ်ဝင်စားစရာ တွေပါ.. စက်ာပူက မထွက်ခွာမီ
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ Harris ကတရုတ်ကို ပြတ်သားစွာဝေဖန်လိုက်တာတွေ့ရတယ်.. “တရုတ်တွေ ASEAN ကိုချစ်ကြည်ရေးတည်ဆောက်တယ်ဆိုတာယုံဖို့ခက်တယ်..” ( စပရက်စလီကျွန်းတွေနဲ့ ပါရာစယ်လ်ကျွန်းတွေနဲ့ ပြသနာကို ရည်ညွှန်းတယ် ) ” US would stand with our allies in the face of threats.” အမေရိက
ကသာလျှင်တရုတ်ခြိမ်းခြောက်မှုကို အမှန်တကယ် ကာကွယ်ပေးမဲ့မဟာမိတ်ပဲ လို့ သံခင်းတမန်ခင်း ရန်စမှုနောက်မှာ ???? ] တိုက်ဆိုင်စွာပဲ Havana Syndrome တစ်ဖွဲ့လုံးဖြစ်လာတော့တယ်… ကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲကစပြီ
crd-M Kawn La
တိုက္ဆိုင္မူလား – တိုက္ခိုက္မူလား ( စကၤာပူ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ တ႐ုတ္ကို ျပတ္သားစြာေဝဖန္လိုက္တဲ့ အေမရိကန္ ဒုသမၼတ Harris က်န္းမာေရး႐ုတ္တရက္ ခ်ိဳ႕ယြင္း )
Harris ဗီယက္နမ္မထြက္ခြာမီ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕ယြင္းတယ္..3နာရီေလာက္ေနာက္က်မယ္ေျပာတယ္.. ဒီည ဗီယက္နမ္ေရာက္ Harris သတင္းအေျခအေန မသိရေသးပါ.. ေရာဂါကေတာ့ ႐ုတ္တရက္ ေခါင္းမူး ေအာ့အန္ မွတ္ဉာဏ္ခ်ိဳ႕ယြင္း ျဖစ္တဲ့ Havana Syndrome လို႔ေျပာေနပါတယ္.. စိတ္ဝင္စားစရာ ေတြပါ.. စက္ာပူက မထြက္ခြာမီ
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ Harris ကတ႐ုတ္ကို ျပတ္သားစြာေဝဖန္လိုက္တာေတြ႕ရတယ္.. “တ႐ုတ္ေတြ ASEAN ကိုခ်စ္ၾကည္ေရးတည္ေဆာက္တယ္ဆိုတာယုံဖို႔ခက္တယ္..” ( စပရက္စလီကၽြန္းေတြနဲ႔ ပါရာစယ္လ္ကၽြန္းေတြနဲ႔ ျပသနာကို ရည္ညႊန္းတယ္ ) ” US would stand with our allies in the face of threats.” အေမရိက
ကသာလၽွင္တ႐ုတ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို အမွန္တကယ္ ကာကြယ္ေပးမဲ့မဟာမိတ္ပဲ လို႔ သံခင္းတမန္ခင္း ရန္စမႈေနာက္မွာ ???? ] တိုက္ဆိုင္စြာပဲ Havana Syndrome တစ္ဖြဲ႕လုံးျဖစ္လာေတာ့တယ္… ၾကည့္ေကာင္းတဲ့ပြဲကစၿပီ
Previous Article သာကောတရုတ်ကတော့လေယာဉ်တင်သင်္ဘော အဝတ်အစားပါ ထုတ်ကြော်ငြာလာ
Next Article တရုတ်အတွင်းပိုင်းထိ ပစ်ခတ်နိုင်မည်၊အမေရိကန်ကြည်းတပ်ရဲ့ အာရှတစ်ခုလုံးကို လွှမ်းခြုံထားနိုင်မယ့် Dark Eagle လက်နက်စနစ်